Ukuphupha malunga nemephu Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Imephu ngumfanekiso womhlaba, ofanayo nomhlaba. Inokwenziwa kwizikali ezahlukeneyo kwaye ke ayibonisi umhlaba uphela, kodwa ikwindawo ezichanekileyo zomhlaba ezinje ngeedolophu okanye imimandla ngokuchanekileyo. Ngokwesiko, imephu yenziwa ephepheni.
Ukufumana indlela kwihlabathi lamaphupha, ngamanye amaxesha imephu inokuba luncedo kakhulu. Mhlawumbi sesinye sezizathu zokuba imephu ihlala ibonwa njengomfanekiso wephupha.
1 Uphawu lwephupha «imephu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «imephu» - ukutolika kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imephu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imephu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uphupha ujongana ngqo nemephu e- el mundo yamaphupha kwaye uyifunde ngokufanelekileyo, ke oku kunokuba ngokophando lwamaphupha kwizicwangciso ezizodwa okanye enye uhambo olude Iingoma. Ngamanye amaxesha kukho intengiso hambisa okanye utshintsho lomsebenzi kulo mfanekiso wephupha.
Uninzi lwexesha, ukujonga imephu luphawu olulungileyo kubo. mpu melelo yeprojekthi kwilizwe lokwenza iwotshi. Mhlawumbi kukho iprojekthi enkulu yobungcali okanye yabucala ekufuneka ngoku yenziwe.
Ikhadi elinombala liguqulelwa ngokufanelekileyo kule meko kuba Suerte yazisa. Ukuba iinkcukacha kulula ukuzibona kwimephu yamaphupha, uhambo okanye isicwangciso siya kuphumelela kwaye sisebenze kakuhle.
Ubunzima kwihlabathi lokuvuka lidla ngokubonakaliswa kwimephu, engenakufundeka ngokuchanekileyo ephupheni. Apha iingxaki kunye nezithintelo ziya kubangela ubunzima kuhambo okanye kwiprojekthi ecwangcisiweyo.
Isimboli yephupha «imephu» - ukutolika kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, iileta zitolikwa njengezincedisayo kuhambo lobomi. Ukuba ukuphupha kwihlabathi lamaphupha kuyaqhubeka kujonga imephu, oku kunokuba luphawu lokuba uzama ukubuyela kuyo Isikhokelo. Mhlawumbi ulahlekile kwaye waphambuka kwindlela yakhe ecwangcisiweyo.
Ngamanye amaxesha ungabona imephu kwilizwe lamaphupha elibonakala lisetyenziswa kakhulu kwaye libonisa ukuba nabanye abantu bayisebenzisile. Ukuba kunjalo, umfanekiso wephupha kufuneka ubonise ukuba iphupha elo lingafunda kwabanye abantu kwaye liyakuthatha indlela eya kwicala elilungileyo. Ukuphupha kumsebenzisa kwindlela yakhe yobomi iingcebiso Abanye abantu kwaye ubadibanisa namava abo.
Kusenokwenzeka ukuba imephu yamaphupha inika isikhombisi esisondeleyo kwicala apho iphupha kufuneka liye khona ukufezekisa injongo yalo. Ukuba umphuphi akakwazi ukufunda okanye ukuqonda imephu, ke unengxaki kwihlabathi elivukayo lokufumana indlela elungileyo okanye uvela apho. ingxaki ivaliwe.
Ngamanye amaxesha, imephu yamaphupha inokuba yenye Isicelo sohambo limele iphupha.
Uphawu lwephupha «imephu» - ukutolika kokomoya
Imephu itolikwa ekutolikeni iphupha lokomoya njengoncedo lwendlela eya elandelayo injongo yokomoya dibana. Nangona kunjalo, ukuphupha iimfuno kwindlela yokufezekisa kunye namava ayo ukufezekisa le njongo.